Sida Looga Joogo Iibka Adigoon Demin Hogaankaaga | Martech Zone
Sida Loogu Joogto Iibka Adoon Demin Liidhkaaga
Isniin, February 21, 2022 Isniin, February 21, 2022 Samir Sampat
Waqtigu waa wax kasta oo ganacsiga ah. Waxay noqon kartaa faraqa u dhexeeya macmiil cusub oo suurtagal ah iyo in la xidho.
Lama filayo inaad gaadho hogaanka iibka isku dayga wacitaankaaga ugu horeeya. Waxay qaadan kartaa dhowr isku day sida cilmi-baarista qaar ay soo jeedinayaan waxay qaadan kartaa ilaa 18 wicitaan ka hor inta aanad gaadhin hogaanka taleefanka markii ugu horeysay. Dabcan, tani waxay ku xidhan tahay doorsoomayaal iyo duruufo badan, laakiin waa hal tusaale oo ah sababta ay ugu adkaan karto ganacsiyada inay horumariyaan habka rajada iibka.
Maqaalkan, waxaanu ku dabooli doonaa wax kasta oo aad u baahan doonto inaad ka ogaato samaynta wicitaanada iibka ee hogaaminta, iyo ka sii muhiimsan, samaynta wicitaanada iibka ee u horseedaya beddelaad cusub oo macmiil ah. In kasta oo ganacsi kastaa uu yeelan doono istaraatijiyad fidis ah oo ka duwan, waxaa hubaal ah in ay jiraan talooyin iyo hababka ugu fiican ee adiga iyo ganacsigaaga kaa caawin kara inta aad jidka ku jirtaan go'aamo wanagsan.
Inta aynaan sii qoto dheer u gelin arrinkaas, aynu si degdeg ah u eegno xaaladda iibka, inagoo hoos u dhigayna tirada.
Tirakoobka Iibka Marka La eego
Sida laga soo xigtay HubSpot iyo Spotio:
40% dhammaan xirfadlayaasha iibka ayaa sheegaya in rajadu ay tahay qaybta ugu adag ee shaqadooda
Hadda, kaliya 3% dhammaan macaamiisha ayaa aaminsan wakiilada iibka
80% iibka ayaa u baahan ugu yaraan shan wicitaanada dabagalka ah, halka inta badan 44% wakiilada iibka ay iska daayaan hal dabagal kadib (laba wicitaan oo wadar ah)
Iibsadayaashu waxay soo sheegaan inay aad ugu dhowdahay inay aqbalaan wicitaanka iibka haddii lagu sameeyo wakhti hore loogu heshiiyey
Waxay qaadan kartaa inta ugu badan 18 wicitaanada si aad ula xidhiidho macmiil iman kara
Kiiska iibka ee wacitaannada hogaanka waxay noqon kartaa jahawareer. Si kastaba ha ahaatee, waxay kaa caawinaysaa inaad fahamto halka ay arrimuhu taagan yihiin si aad u ogaato sidaad horay ugu socon lahayd si aad guul ugu gaadho ganacsigaaga. Iyo markaad ka jawaabto su'aasha ah ilaa intee la sugi karo inta u dhaxaysa wicitaanada, waxaad awoodi doontaa inaad hesho dheelitirnaanta jilicsan ee joogtada ah adigoon dhibin rajadaada iibka.
Waxa kale oo jira xog badan oo la heli karo oo halkaas ka caawin karta inay hagto istaraatiijiyadaada wacyigelinta, sidoo kale.
Hadda, aynu si dhab ah uga hadalno wax ku saabsan iibka laftiisa iyo samaynta wicitaannada iibka.
Samaynta Wicida Iibka
Markaad samayso wicitaanka iibka ugu horreeya, waxaad u baahan doontaa inaad si buuxda ugu diyaargarowdo natiijo kasta oo ka iman karta wicitaanka. U diyaar garow in wicitaanka laga jawaabo hogaankaaga oo gaarsii garoonkaaga sida aad fariin uga tagto oo aad mar kale isku daydo mar kale hadhow. Taasina waa su'aasha milyan-dollar-intee ka dib?
Hogaamiye kasta iyo macaamiishu way kala duwanaan doonaan, sida badanaa dhacda wax kasta oo kale oo nolosha ah. Si kastaba ha noqotee, marka aad sameyso wicitaanka iibka bilowga ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad diyaar u tahay inaad furto albaabka xiriir cusub iyo macmiil cusub oo suurtagal ah. Inta badan, wakiilada iibku waxay isla markiiba tagaan meel u dhow, taas oo sababta in si degdeg ah loo xiro ka hor inta uusan xitaa taleefoonka ogaanin in la iibinayo.
Haddii hogaanka ka jawaabi waayo wacitaankaaga marka ugu horeysa, waa inaad ka tagtaa fariin wacan laakiin tafatiran haddii ay jirto ikhtiyaar lagu sameeyo. Ku martiqaad inay dib kuugu soo wacaan lambarka ugu fiican si ay kuu soo gaadhaan ama kula taliso inaad ku faraxsanaan lahayd inaad ku xidhmaan wakhti iyaga ugu fiican. Sidan, waxaad siinaysaa ikhtiyaarkaaga hogaanka aad ka doorato iyo dareenka xakamaynta xaalada. Dad badan ayaa go'aankooda si fudud u beddeli doona iyadoo la siiyo ikhtiyaarka ah in dib loo soo waco taariikhda iyo waqtiga loo qorsheeyay.
La-socod Adigoo Gaadhsiinaaya Rajada
Iyadoo macaamiisha intooda badani ay filayaan jawaabta ugu horreysa ee su'aalaha ganacsiga 10 daqiiqo ama ka yar, xaaladaha intooda badan, waxay bixiyaan xoogaa dabacsanaan ah marka ay timaado xiriirka socda iyo isgaarsiinta. Khubarada horumarinta ganacsiga waxay soo jeedinayaan inaad ogolaato saacadood 48 ka dib markaad wacdo hogaanka ka hor inta aanad mar kale la xiriirin iyaga. Tani waxay hubinaysaa in aad waqti u ogolaatay jadwalkooda mashquulka badan adoon u iman wax dhibsado ama quus ah. Waxa kale oo ay ku siinaysaa hoggaankaaga wakhti aad ku tixgeliso alaabtaada ama adeeggaaga iyo haddii ay tahay wax ay rabaan ama u baahan yihiin.
Waxaad sidoo kale ogeysiin kartaa rajadayaasha inay awoodaan ku soo gaadho iyo in ay sidaas ku samayn karaan dhowr kanaal. Tani waxay u ogolaanaysaa inay doortaan kanaalka ay ku qanacsan yihiin waxayna u badan tahay inay kordhiso fursadahaaga inaad hesho jawaab celin. Oo haddii aan si gaar ah laguula soo xiriirin ama lagugu codsan inaad soo celiso wac isla markiiba, ha wicin isla ledhka laba jeer isla maalintaas. Waxa ay dhadhan xun ku reebtaa afka rasaasta sababta oo ah waxa ay inta badan ka soo baxdaa iyada oo xoogaa riixaysa oo quus ah.
Isku-dheelitirka farxadda leh, waxay u muuqataa, meel u dhaxaysa 24 iyo 48 saacadood wicitaanada labaad iyo kuwa xiga. Tusaale ahaan, haddii aad horay u soo wacday rajadaada laba jeer usbuucan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka fikirto inaad sugto ilaa usbuuca soo socda isku day wicitaan oo kale. Waa fal arragti isku dheeli tiran oo jilicsan halkan, dabcan, waana inaad aragto waxa adiga iyo ganacsigaaga ugu fiican Markaad xisaabiso sida wanaagsan ee wacitaankaaga dabagalku u socdo, waxaad inta badan heli kartaa fikrad fiican waxa kooxdaada u shaqeeya.
Dabcan, hal dariiqo si loo hubiyo in dhammaan Wicitaanada wacitaanka iibka ayaa la sameeyaa (oo la helay) waqti ku habboon waa inaad u ogolaato qof kale inuu qabto shaqada adiga iyo kooxdaada. Outsourcing waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka ah inaad haysato koox xirfadle ah oo dhinacaaga ah oo fahma dhammaan waxa la socda samaynta la-socod la-socod iib ah, wicitaanno taageero ah, iyo wax ka badan si aad ganacsigaaga u sii shaqeyso. Haddii aad go'aansato inaad doorbidayso inaad uga tagto dib-u-celinta qof kale intaad diiradda saarayso macaamiishaada, taasi waxay hubin doontaa in wicitaan kasta lagu soo celiyo wakhtiga saxda ah iyo natiijada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Ku saabsan Smith.ai
Smith.ai Wakiiladu waxay sameeyaan wicitaano magacaaga, iyagoo hagaajinaya xawaaraha-u- hogaaminta iyo shaqaalaha aan culayska saarnayn ee u baahan inay la xiriiraan macaamiisha. Waxay dib u soo wici doonaan hogaamiyayaasha khadka ee buuxiya foomamka shabakada, la xidhiidh deeq bixiyayaasha cusboonaysiinta deeqaha, ceyrsada lacagaha qaansheegyada aan la bixin, iyo in ka badan. Waxay xitaa soo diri doonaan iimaylo daba-gal ah iyo qoraallo wicista ka dib si loo hubiyo in xidhiidh la sameeyay.
Si dhakhso leh ula soco marka Smith.ai Wakiilada farsamada gacanta ayaa u adeega sida kooxdaada wacyigelinta:
Wax badan ka baro Smith.ai
Tags: aisirdoonka macmalhubsashowacyigeliniibinta wicitaankaiibka call statisticsiibka call statsdabagalka iibkagaadhsiinta iibkasmith.aispotiowicitaanada casriga ahkaaliyaha dibadda dibadda u ahkaaliyaha codka
Samir Sampat waa Suuqgeynta iyo Xiriiriyaha Dhacdooyinka Smith.ai. Smith.ai's 24/7 soo dhawaynta casriga ah iyo wakiilada wada sheekaysiga tooska ah waxay qabtaan oo ku beddelaan hogaanka telefoon, ku sheekeysi shabakad, qoraalo, iyo Facebook. Waxaad kula socon kartaa Smith.ai Twitter, Facebook, LinkedIn, iyo YouTube.
Sida ugu Fudud ee Looga Yareeyo Shopify kaaga CSS ee Lagu Dhisay Isticmaalka Kala-duwanaanshaha dareeraha ah